जुआन रामोन जिमनेज, पत्रका जादूगरका मुख्य कार्यहरू वर्तमान साहित्य
जुआन रामन जिमनेजको मुख्य कार्यहरू
जुआन अर्टिज | | जीवनी, लेखकहरू, किताबहरु
जुआन रामन जिमनेजको उद्धरण।
जब एक इन्टरनेट प्रयोगकर्ता "मुख्य कार्य जुआन रामोन जिमनेज" को लागी खोजी गर्दछ, नतीजा उसको तीन सबैभन्दा प्रख्यात शीर्षकहरूमा औंल्याउँछ। अर्थात्, सोरस एक्लोपन (1911), प्लेटो र म (1914) र नव विवाहित कविको डायरी (१ 1916 १XNUMX) तीनिहरुमा उसको शैलीको सबैभन्दा कुख्यात सुविधाहरु पहिचान गर्न सम्भव छ: subjectivity, पूर्णतावाद, चिन्तन, सदाको लागि खोज र "कुरूपताको सौन्दर्य"।
यद्यपि कुनै पनि साहित्यिक समीक्षा भित्र यसलाई उल्लेखित प्रकाशनहरूमा मात्र सीमित राख्न धेरै पक्षपाती हुन सक्छ। जे भए पनि, यी साहित्यहरूका लागि नोबेल पुरस्कार विजेताको गीतहरू हुन्। अरु के छ त, यसको हरेक रचनात्मक चरणहरूमा Ens संवेदनशील (१1889 1915 - - १ 1916 १1936), बौद्धिक (१ 1937 १ - - १ 1958 XNUMX), र सत्य (१ XNUMX XNUMX - १ XNUMX XNUMX) - आफ्नो समय मा धेरै महत्वपूर्ण लेखहरु प्रकाशित.
1 जुआन रामन जिमनेजको जीवन
1.1 जन्म र अध्ययन
1.2.1 मुटुको ब्रेकर
2 जुआन रामन जिमनेजको साहित्यिक चरणहरू
2.1 संवेदनशील चरण (१1898 1915 - - १ XNUMX १XNUMX)
2.1.1 सोन्सोर एक्लोपन (१ 1911 ११)
2.1.2 सिल्वरस्मिथ र म (१ 1914 १XNUMX)
2.1.3 जिमनेजको संवेदनशील चरणबाट अन्य कार्यहरू
2.2 बौद्धिक चरण (१ 1916 १ - - १ 1936 XNUMX)
2.2.1 नव विवाहित कविको डायरी (१ 1917 १XNUMX)
2.2.2 जुआन रामोन जिमनेजको बौद्धिक चरणबाट अन्य कार्यहरू
2.3 सत्य चरण (१ 1937 1958 - १ XNUMX XNUMX)
2.3.1 Jiménez को सही चरण को शीर्षक
2.3.2 किंवदंती (१ 1978 XNUMX - पोस्टमार्टम)
जुआन रामन जिमनेजको जीवन
उहाँ डिसेम्बर २,, १ 23१ मा स्पेनको मोगुएरमा जन्मनुभएको थियो। उनका आमाबुबा भेक्टर जिमनेज र पुरीफिसिअन मन्टेकन लोपेज-परेजो रक्सीको व्यापारमा संलग्न थिए। सानो जुआन रामेनले कोलिजियो डे प्राइम्रे वा सेगुंडा एन्सेन्जा डे सान जोसेको इलिमेन्टरी स्कूलमा भाग लिए। पछि उनी "ला ​​रबिडा" संस्थान (हुवेल्वा) गए र उनले पोर्टो डे सान्ता मारियाको सान लुइस गोन्जागा एकेडेमीमा उच्च विद्यालयको अध्ययन गरे।
सुरुमा, जिमेनेजले विश्वास गरे कि उनको पेशा पेन्टिंग थियो; यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै उनी १1896 XNUMX in मा सेभिलमा बसाई सरे। तथापि, छोटो समयमा उसले आफ्नो पहिलो गद्य र कविता लेखोट पूरा गरे र पछि अन्डालिसियाका विभिन्न अखबार र पत्रिकाहरूको लागि योगदानकर्ता भए। समानान्तरमा, शुरू भयो - प्यारेन्टल लादेर - सेभिल विश्वविद्यालयमा कानूनको क्यारियर (उनले १ 1899 in मा छोडे)।
1900 मा उनी म्याड्रिड सरे, जहाँ उनले प्रकाशित गरे Nymphaeas y वायोलेटको साउल्स, आफ्नो पहिलो दुई पुस्तकहरु। उही वर्ष आफ्नो बुबाको मृत्यु पछि परिवारको सबै सम्पत्ति गुमाए पछि एक गहिरो उदासिनता मा बान्को डि बिलबाओसँगको विवादमा।
फलस्वरूप, जिमनेजलाई बोर्डोको मनोचिकित्सा अस्पतालमा भर्ना गरियो र पछि स्पेनको राजधानीको सेनेटोरियो डेल रोजारियोमा। वास्तबमा, कविको जीवन भर उदासिनता लगातार बिरामी थियो। खास गरी फ्रान्कोको तानाशाहीको सुदृढीकरण र भातृको मृत्युपश्चात गृहयुद्धको शुरूवात पछि।
एक साँचो क्यासानोभा हुनु अघि, अन्डालिसियाका लेखक ब्लान्का हर्नान्डेज पिन्जनसँग धेरै माया गर्थे, आफ्नो पदहरूमा "सेतो दुलही" को रूप मा उल्लेख छ। पछि, उसले "भेदभाव गरेन" वा उत्पत्ति, पेशा वा वैवाहिक स्थिति आफ्नो प्रेम मामिलाहरूको लागि। उनीसँग उनी सबै प्रकारका थिए: विवाहित महिला, एकल महिला, विदेशी र यहाँसम्म कि - जोसे ए एक्सपोसिटोका अनुसार उनका सम्पादक - ननहरू समेत थिए।
जुआन रामन जिमनेजको साहित्यिक चरणहरू
संवेदनशील चरण (१1898 1915 - - १ XNUMX १XNUMX)
डन्जुएन् डी जिमेनेजको अनुभव विशेष रूपमा मा उनीहरूलाई प्रतिबिम्बित गीतको कारण महत्त्वपूर्ण थियो प्रेम पुस्तकहरू (१ 1911 ११-१२), १०12 कविताहरूमा संरचित। यो चरण ह्युस्का लेखकको सबैभन्दा प्रशंसनीय थियो। यसमा उनले आधुनिकतावादी प्रवृत्ति र त्यस समयको साहित्यिक प्रतीकवादका साथै गुस्ताभो एडोल्फो बाक्करको स्पष्ट प्रभाव झल्काए।
त्यस्तै गरी, यस चरणको अन्त्यमा फ्रान्सेली प्रतीकात्मक प्रभाव जस्ता बौद्धिक मानिसद्वारा मूर्त रूप लिइएको हो चार्ल्स बेउडेलियर वा पावल भेरलिन, अरूहरू बीच। फलस्वरूप, उनका कार्यहरूमा परिदृश्य र आदर्श स्रोतहरूको धेरै सान्दर्भिकता छ, जहाँ उदासिन एक स्थिर भावना हो।
सोरस एक्लोपन (1911)
यो जिमनेजको सबैभन्दा कम अध्ययन गरिएको कविता संग्रह हो, तर कम प्रासंगिक हो। त्यस टुक्रामा रहेका फार्महरू, साथै यसको सामग्रीले कविताको आधुनिकतावादी "विरासत" बाट टाढा रहेको पुष्टि गर्दछ। तसर्थ, यो कार्यले यसको समयको लागि धेरै श्रमयुक्त काव्य नवीकरणको उद्घाटन प्रतिनिधित्व गर्दछ।
“साँझको सुन गुलाबी हुँदैछ;
तरकारीहरू अझै छन् र निलो चिसो छ;
र सूर्यको भ्रममा, एउटा पुतली उड्दछ
elegiac, indolent, पारदर्शी "...
SOLEDAD SONORA कार्यहरू ...
प्लेटो र म (1914)
यो शिक्षाविदहरु द्वारा सबै समय को स्पेनी मा एक सबै भन्दा महत्वपूर्ण गीतहरु को रूप मा मानिन्छ। त्यस्तै, जिमेनेजका लागि यसको अर्थ साहित्यिक आधुनिकतावादबाट अभिव्यक्त भएको अभिव्यक्ति हो जुन महान भावनाहरू र वर्णनात्मक घनत्वले भरिएको थियो। यसैले, सिल्वरस्मिथ यो बच्चाहरूको कथा जस्तो देखिन्छ, तर यो पक्कै होइन (लेखक आफैले दावी गरेको हो)।
अर्कोतर्फ, आफ्नो मूल Andalusia र केहि व्यक्तिगत संयोगको लगातार सन्दर्भको बावजुद, न त यो एक आत्मकथागत खाता हो। वास्तवमा, जिमनेजले वास्तवमै उदात्त गद्य कविता सिर्जना गरे, एक कालक्रम क्रम अभाव। तर समय सदाको लागि अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ, जहाँ सुरुवात र अन्त्य मौसमहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
“प्लेटेरो सानो, कपालदार, नरम हो; बाहिरमा यति नरम, कि कसैले भन्दछ कि यो कपासबाट बनेको छ, कि यसमा हड्डीहरू छैन। केवल उसको आँखाको जेट ऐनाहरू दुई कालो गिलास बीटलहरू जस्तै कडा छन् "(…)" उहाँ कोमल र गुलियो जस्तै छ, केटा जस्तै,…, तर सुक्खा र बलियो ढु inside्गा जस्तै। "
प्लेटेरो र म (शास्त्रीय)
जिमनेजको संवेदनशील चरणबाट अन्य कार्यहरू
दुखद arias (1902)।
टाढा बगैंचा (1904)।
बौद्धिक चरण (१ 1916 १ - - १ 1936 XNUMX)
यस अवधिमा - आफैले यसरी बप्तिस्मा लिए - Andalusian कवि धेरै महत्वपूर्ण घटनाहरु द्वारा गहिरो चिह्नित थियो। पहिलो, अमेरिकाको उनको पहिलो अभियान र ब्लेक, यिट्स, ई। डिकिंसन र शेली जस्ता लेखकहरूको ए Anglo्ग्लो-स्याक्सन कवितामा पुग्ने दृष्टिकोण।
दोस्रो घटना थियो जेनोबिया क्याम्प्रुबसँग उनको विवाह, उनका अन्तिम साथीहरू सम्म उनका विश्वासी साथी। अन्तमा, समुद्र एउटा महत्त्वपूर्ण प्रेरणा बन्न गयो, किनकि जिमनेजको लागि समुद्रको अर्थ जीवन, गोपनीयता, एकान्तता, आनन्द र सदाको लागि थियो।
नव विवाहित कविको डायरी (1917)
नामले संकेत गरे जस्तै, यस काममा जिमनेजले क्याम्पुरुसँग हालसालै गरेको विवाहमा उत्पन्न प्रभाव व्यक्त गरे। त्यस्तै गरी, न्यू योर्कको आधुनिकताले विश्वको आफ्नो अवधारणामा परिवर्तन ल्यायो र सजावटी विशेषणहरू नभएको गीतको उदयको लागि अग्रसर भयो। जहाँ नग्न संज्ञाको प्रयोग प्राथमिक छविहरू जगाउनको लागि हो।
थप रूपमा, जुआन रामोन जिमनेज आफूलाई परम्परागत काव्यमय रूपबाट सबजेन्सको आश्चर्यजनक र नवीन मिश्रणको हानि गर्न टाढा राखियो (यसकारण यसको महत्व)। यस्तो संयोजनले विरोधाभासहरूले भरिएको महानगरको अविरल अराजक हलचललाई संकेत गर्‍यो। विशेष रूपमा, यस काममा गीतको फार्महरू तल उल्लेखित छन्:
एक कवि को डायरी ...
जुआन रामोन जिमनेजको बौद्धिक चरणबाट अन्य कार्यहरू
आध्यात्मिक सोनेट (1917)।
ढुone्गा र आकाश (1919)।
सत्य चरण (१ 1937 1958 - १ XNUMX XNUMX)
यसको सुरुवात जिमेनेजको श्रीमतीको साथ अमेरिकी महादेशमा स्पेनको गृहयुद्धको लागि निर्वासनमा गरिएको थियो। तसर्थ, गीतमा उर्जाको परिवर्तन सुस्पष्ट भयो, एक कवि धेरै प्रभावित र आफ्नो देशका घटनाहरू द्वारा दु: खी। तसर्थ, उनको रचनाहरु अधिक रहस्यमय, विचारशील, र आध्यात्मिक भयो।
अझ गम्भीर कुरा भन्ने हो भने, उहाँकी श्रीमतीको १ 1956 inXNUMX मा क्यान्सरसँग लामो लडाई पछि मृत्यु भयो।। यस कारणले गर्दा उनको उदासिनता यस्तो थियो कि उनी विधवा हुनु भन्दा केही दिन अघि साहित्यको नोबेल पुरस्कार लिनसमेत गएनन्। त्यो आत्मनिर्भरता र उजाडता कविको साथ उनको मृत्युको दिनसम्म थियो, जुन मे २,, १ 29 1958 मा भएको थियो।
Jiménez को सही चरण को शीर्षक
मेरो गीतका आवाजहरू (1945)।
कुल स्टेशन (1946)।
कोरल गेब्स रोमान्स (1948)।
पशु पृष्ठभूमि (1949)।
एक मेरिडियन पहाडी (1950)।
किंवदन्ती (१ 1978 XNUMX - पोस्टमार्टम)
यो पुस्तक विशेष उल्लेख पाउन योग्य छ किनकि यो जुआन रामोन जिमनेज आफैले गरेका काम (१ 1896 1956 - - १ XNUMX XNUMX) बाट लिइएको सम्पूर्ण संशोधन हो। यो एन्टोनियो सान्चेज रोमेरलो द्वारा प्रकाशित गरिएको थियो र पछि २००í मा मारिया एस्टेला अर्रेचे द्वारा सहि संस्करण प्राप्त भयो।.
किंवदंती (१1896 1956-१XNUMX XNUMX)) ...
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » जुआन रामन जिमनेजको मुख्य कार्यहरू
एक सय वर्षको एकान्ततामा गेब्रियल गार्सिया मार्क्वेजले प्रसिद्ध उद्धरणहरू
स्पेन्सर ट्रेसी जन्मदिन उनको सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कागजात